तपाईले महिनामा मोबाइलमा कुरा गर्दा कति खर्च गर्नुहुन्छ ? यसरि सजिलै हेर्नुहोस पुरा विवरण «
तपाईले महिनामा मोबाइलमा कुरा गर्दा कति खर्च गर्नुहुन्छ ? यसरि सजिलै हेर्नुहोस पुरा विवरण
Published : 22 January, 2020 1:23 pm
आफ्ना ग्राहकको सहजताका लागि नेपाल टेलिकमले अनलाईनबाटै हरेक महिनाको बिल हेर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । टेलिकमले ल्याण्डलाइन तथा मोबाइलबाट भएको खर्चको हरेक महिनाको बिल अनलाइनबाटै हेर्ने सुविधा थप गरेको हो । जसमा जीएसएम, पीएसटीएन र सीडीएमएको बिल हेर्न सकिने छ ।